Sei kurodha pasi Arenti app?
1. Dzvanya bhatani pazasi kuti upinde Arenti Download Center uye kurodha Arenti app pane ako nhare mbozha.
2. Unogona kudhawunirodha app yeArenti kune yako iPhone kana Android foni nekutsvaga izwi rakakosha "Arenti" paApp Store kana Google Play kana kuongorora kodhi yeQR sezasi.
Nzira yekubatanidza sei Alexa neArenti?
1. Gadzira network pane Arenti App
Gadzira Arenti kana Laxihub kamera uye uzere network kumisikidzwa zvinoenderana nezvinofambiswa paArenti App
Ongorora: Edza kutumidza kamera yako paArenti App nemazwi ari nyore kuzivikanwa senge "Front Door Kamera", uye usashandise mavara akakosha; unogona kureva bhuku remushandisi rechidzitiro Alexa mudziyo kana peji rewebhu rakakodzera runyorwa rwemitauro yakatsigirwa.
2.Gadzira yako sikirini Alexa mudziyo
(Kana iwe watogadzira yako skrini yeAkih kifaa seAmazon Echo Show kana Amazon Echo Spot, ipapo unogona kusvetuka danho iri. Iyi inotevera mirairo yakavakirwa paAlex Alexa Alexa App)
1. Vharidzira sikirini yako Alexa mudziyo mune yekubuditsa magetsi.
2. Sarudza mutauro pachiratidziro chemuchina, tora mudziyo wako ubatanidzwe kunetiweki yeWi-Fi, kusaina muakaunti yako yeAmazon, uye wozopedzisa kumisikidza zvinoenderana nezvinokurudzirwa paAmazon App.
3. Vhura iyo Amazon Alexa App panharembozha yako. Saina kuakaundi yako yeAmazon, wobva wabata maDhijitari pazasi pekufambisa bar, sarudza GROUP (semuenzaniso Living Living) kwawakawedzera chishandiso, uye iwe uchaona yako skrini yeAki kifaa mune iri GROUP.
Nzira yekubatanidza sei Google Assistant neArenti?
Ongorora:Edza kutumidza kamera yako paArenti App nemazwi ari nyore kuzivikanwa senge "Front Door Kamera", uye usashandise mavara akakosha; unogona kureva bhuku remushandisi reGoogle Mubatsiri mutauri wakasanganiswa kana peji rewebhu rakakodzera runyorwa rwemitauro yakatsigirwa.
2. Gadzira mudziyo weGoogle Kumba
(Kana iwe watogadzira Google Mubatanidzwa mudziyo wakadai seGoogle Home mutauri kana Google Nest Hub, ipapo unogona kusvetuka nhanho iyi. Iyi inotevera mirairo yakavakirwa paGoogle Kumba iOS App)
1. Ita shuwa kuti chako Google Mubatsiri mudziyo unowaniswa simba uye wakabatanidzwa kune yeWi-Fi network.
2. Vhura Google Home App panharembozha yako, tinya Kutanga pazasi kurudyi uye kusaina kuGoogle Akaunti yako, wobva wadzvanya "Get Start" pakati peyako mbozhanhare mbozha.
Foni haigone kugamuchira alarm yekumhanyisa meseji?
Iwe unofanirwa kugonesa iyo push mvumo yeiyo "Arenti" app kuti ugamuchire Push meseji zvakajairika. Paunotora download nekupinda mukati kekutanga, pop-up hwindo rinokukurudzira kuti ubvumidze mvumo. Kana iwe ukasarudza kuidzima, iwe unofanirwa kuisa iyo foni masystem-ziviso-tsvaga "Arenti" uye gonesa ziviso mvumo.
Haugone kugamuchira zviziviso pafoni yangu?
Ndokumbirawo musimbise kuti iyo App yanga ichimhanya parunhare, uye chiyeuchidzo chinoshanda chakavhurwa; Meseji ziviso uye kusimbiswa kwechiremera mune mbozhanhare system yakavhurwa.
Maitiro ekusetazve mudziyo muAPP?
Kana iwe uchida kudzima chishandiso paapp uye wobva wawedzera icho zvakare, ingoita seinotevera:
1-Dzvanya kamera pane iyo "Kamera" peji yekuisa iyo "Zvirongwa" peji.
2-Pane bhatani "Delete" pazasi.
3-Dzvanya kuti ubvise chishandiso kubva kuaccount.
Vangani vanhu vanogona kupinda muakaunti panguva imwe chete?
Akaunti inogona kungoiswa mukati neimwe nhare mbozha uye imwe komputa panguva imwe chete, uye vamwe vanhu vanogona kungotarisa kamera kuburikidza neyakagovana michina.
Iwe unogona kusarudza kuti ubvumidze kufamba kwekuona / kurira kwearamu kuburikidza neZvirongwa-Alarm Zvirongwa, uye sarudza yakaderera / yepakati / yakanyanya kunzwisisika.
Chinja SD kurekodha / gore kurekodha?
Nezve mubvunzo wako, mhinduro dzinotevera:
Dzvanya pane iyo kamera iwe yaunoda kutarisa pane peji rekumba kuti upinde peji rekutanga, tinya pane nhoroondo pazasi kusarudza SD kadhi / gore kutamba.
Dzvanya bhatani pazasi, uye dhawunirodha Arenti App pane ako nhare mbozha zvakananga.
Kana iwe unogona kurodha Arenti app kune yako iPhone kana Android foni nekutsvaga kiyi izwi "Arenti" paApp Store kana Google Play kana kuongorora iyo QR kodhi sezasi.
Iwe unofanirwa kugonesa iyo Push mvumo yeiyo "cloudedge" app kuti ugamuchire Push meseji zvakajairika. Paunotora download nekupinda mukati kekutanga, pop-up hwindo rinokukurudzira kuti ubvumidze mvumo. Kana iwe ukasarudza kuidzima, iwe unofanirwa kuisa iyo foni masystem-ziviso-tsvaga "cloudedge" uye gonesa ziviso mvumo.